Abbaan Alangaa Federaalaa namoonni 746 mana hidhaatii akka lakkifaman kan murtaaye tahuu beeksise. - NuuralHudaa
Abbaan Alangaa Federaalaa namoonni 746 mana hidhaatii akka lakkifaman kan murtaaye tahuu beeksise.
Last updated Feb 26, 2018 35
Namoonni gaaffii mirga amantaa fi yakka adda addaatiin itti murtaa’ee mana hidhaa Federaalaa keessa jiran 417 ‘dhiifamaan’ akka gad-dhiifaman kan murtaahe tahuu FBC’n gabaase. Abbaan Alangaa Federaalaa FBCf akka himetti, namoota akka gad lakkifaman murtaaye kanneen keessaa 298 mana hidhaa federaalaa irraa yoo tahu, hidhamtoonni 119 ammoo manneen hidhaa naannoo Amaaraatti argaman irraa akka tahe gabaasni kun ni ibsa.
Dabalataanis himannaan shakkamtoota 329 akka adda citu kan murtaaye akka ta’ee fi haaluma kanaan shakkamtoota 278 manneen hidhaa federaalaa, 18 naannoo Amaaraa, 33 nannoo Tigraay keessa jiran himannaan adda citee, leenjii haaromsaa fudhatanii akka gadhiifaman kan murtaaye tahuu gabaasni kun ni mul’isa.
May 19, 2022 sa;aa 6:09 pm Update tahe